I-China Brazil- Isevisi ye-ANATEL Nokuhlola | I-MCM
Kuyini i-ANATEL Homologation?
I-ANATEL iyisifushaniso se-Agencia Nacional de Telecomunicacoes okuyigunya likahulumeni waseBrazil lokuqinisekisa imikhiqizo yokuxhumana eqinisekisiwe neyokuzithandela. Izinqubo zayo zokuvunywa nokuhambisana ziyafana kokubili imikhiqizo yasekhaya yaseBrazil nakwamanye amazwe. Uma imikhiqizo isebenza kwisitifikedi esiyimpoqo, umphumela wokuhlola nombiko kufanele kuhambisane nemithetho nemithetho ebekiwe njengoba kucelwe yi-ANATEL. Isitifiketi somkhiqizo sizonikezwa yi-ANATEL kuqala ngaphambi kokuba umkhiqizo usatshalaliswe ekumaketheni bese usetshenziswa ngokoqobo.
HoUbani onesibopho se-ANATEL Homologation?
Izinhlangano ezijwayelekile zikahulumeni waseBrazil, ezinye izinhlaka ezaziwayo zezitifiketi kanye namalebhu okuhlola yiziphathimandla zezitifiketi ze-ANATEL zokuhlaziya uhlelo lokukhiqiza lweyunithi yokukhiqiza, njengenqubo yokuklanywa kwemikhiqizo, ukuthenga, inqubo yokukhiqiza, ngemuva kwensizakalo nokunye ukuqinisekisa umkhiqizo ophathekayo okufanele ulandelwe neBrazil ejwayelekile. Umkhiqizi uzohlinzeka ngemibhalo namasampula wokuhlola nokuhlola.
● I-MCM inesipiliyoni seminyaka eyi-10 nezinsizakusebenza embonini yokuhlola neyokuqinisekisa: uhlelo lwensizakalo esezingeni eliphakeme, ithimba lobuchwepheshe eliqeqeshwe ngokujulile, uhlelo olusheshayo nolulula lwesitifiketi nohlolo.
● I-MCM ibambisana nezinhlangano eziningi ezisezingeni eliphakeme ezisezingeni eliphezulu ezihlinzeka ngezixazululo ezahlukahlukene, insizakalo enembile futhi elula yamakhasimende.
Langaphambilini I-China- CQC
Olandelayo: I-Thailand- TISI
Umthetho we-Anatel. 3484
Umthetho we-Anatel. 3484 Isitifiketi
Umthetho we-Anatel. 3484 Inani Lesitifiketi
Umthetho we-Anatel. 3484 Service Certification
Umthetho we-Anatel. 3484 Isikhathi Sokuhola
Umthetho we-Anatel. 344 Quotation
Umthetho we-Anatel. 3484 Ukuhlolwa
Umthetho we-Anatel. 3484 Intengo Yokuhlola
Umthetho we-Anatel. 3484 Insizakalo Yokuhlola
Umthetho we-Anatel. 3484 Isikhathi Sokuhlola
Ukuhlolwa Kwebhethri i-Brazil Anatel
Isitifiketi saseBrazil Anatel
Intengo Yesitifiketi SaseBrazil Anatel
Inqubo Yesitifiketi SaseBrazil Anatel
Isevisi Yesitifiketi SaseBrazil Anatel
Isikhathi se-Brazil Anatel Lead
I-Quote Quote yaseBrazil
Umbiko we-Brazil Anatel
Isidingo saseBrazil Anatel
Ukucaciswa kweBrazil Anatel
Imibhalo Yezobuchwepheshe yaseBrazil Anatel
Imfuneko Yezobuchwepheshe yaseBrazil
Izinto Zokuhlola ze-Brazil Anatel
Indlela Yokuhlola yaseBrazil
Umbiko Wokuhlola waseBrazil
I-Brazil Anatel Testing Lab
Ilebhu Yokuhlola I-Brazil Anatel
Intengo Yokuhlola yeBrazil Anatel
Isevisi Yokuhlola i-Brazil Anatel
Isikhathi Sokuhlola saseBrazil Anatel
EBrazil Anatel Tr